Maareynta Kobaca Iswaafajinta Madaniga iyo Milatariga - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Maareynta Kobaca|Mawduucyada Maareynta Kobaca|Iswaafajinta Madaniga iyo Milatariga
Iswaafajinta Isticmaalka Dhulka Madaniga iyo Milatariga
Sharciga Maareynta Kobaca ee Gobolka Washington (GMA) (RCW 36.70A.530) wuxuu xusayaa doorka weyn ee millatarigu ku leeyahay dhaqaalaha isla markaana wuxuu ku dhawaaqayaa mudnaanta gobolka si looga hortago horumar aan is waafaqikarin oo u dhow aaladaha militariga. Horumarka aan la jaanqaadi karin ayaa sidoo kale u keenaya walaacyo caafimaad iyo badbaado xubnaha jaarka ee deriska ah iyo shaqaalaha milatariga ee ka shaqeeya ama u tababbaranaya waajibaadka firfircoon.
Xiriirka socda iyo qorshaynta iskaashiga ayaa muhiim u ah fahamka danaha rayidka iyo militariga ee dhulka ay wadaagaan. Laga soo bilaabo 2015, Ganacsigu wuxuu horumariyey ilo taageero ah oo loogu talagalay qorsheynta isku-dubbaridan si looga caawiyo wax ka qabashada baahiyaha gaarka ah ee aagagga ku hareeraysan saldhigyada milateriga iyo safafka:
• Buug-tilmaameedka Gobolka Washington ee 2019 ee ku-habboonaanta Milatariga iyo Bulshada PDF
• Xisaabta Is-waafajinta Bulshada ee Difaaca (DCCA) bogga wuxuu faahfaahin ka bixinayaa barnaamijka deeqda iyo warbixinta sharci dejinta ee Sharci dejintu bilaabeen inay ku taageeraan mashaariicda iswaafajinta maxalliga ah (Beddel Golaha Guurtida Bill 5748).
• Qiimeynta Qiimeynta Tamarta La Jaanqaadi Karo (CESA) (hoos eeg) - Mashruuc kor u qaadaya la-tashiga u dhexeeya horumarinta mashruucyada tamarta, taageerayaasha, dib-u-eegista / oggolaanshaha hay'adaha, iyo milatariga inta lagu jiro howlaha horumarka.
• Warbixinta sharci dejinta ee 2016, Daraasadda Isticmaalka Dhulka ee Madaniga iyo Milatariga (PDF), oo ay diyaarisay TSG.
• Xiriirinta barnaamijyada kale ee horumarinta dhaqaalaha ee waaxda militariga iyo difaaca: link dibadda
Qiimeynta Shisheeyaha Tartami kara (CESA)
Qiimeynta Tamarta La Jaanqaadi Karo (CESA) waxay sare u qaadeysaa isku duwida hore ee madaniga iyo militariga si ay u taageerto horumarinta tamarta la cusbooneysiin karo iyo dhowrista heerarka muhimka ah ee tijaabinta / tababarka militariga ee gobolka Washington iyo biyaheeda. Daneeyayaasha ku hawlan fadhi ku dirirka tamarta ama hawlgallada militari waxay u baahan yihiin qaab lagu garto meelaha ay waxqabadyadu isku dhaafaan iyo hagidda latashiga hore ee yareeya suurtagalnimada saameynta labada dhinac.
Gobolka Washington wuxuu hirgaliyay Nadiifi Sharciga Kala-guurka Tamarta ee 2019, u heellan bixinta koronto aan qiiqa laga sii dayn sannadka 2045. Xiisaha tamarta la cusboonaysiin karo ayaa koraysa markii dawladdu ay ku dhaqaaqdo himilooyinkan, taas oo kordhin doonta baahida militariga ee ah inay ilaaliso goobaha baaritaanka / tababarka ee xasaasiga u ah luminta awoodda ama joojinta sababo la xiriira horumar aan isku xirnayn. Isuduwidda hore iyo tan socota waxay ilaalisaa awooda waxqabadka milatari waxayna ka badbaadin kartaa horumariyeyaasha dib u dhacyada suurtagalka ah ama luminta maalgashiga marxaladda dambe. La-tashiga inta lagu jiro horumarka ayaa muhiim u ah wax ka qabashada halista ka jirta meelaha ay militariga ka shaqeeyaan.
In 2019 Ganacsiga wuxuu ku bilaabay mashruuca CESA maalgelin deeq ah oo ka socota Wasaaradda Difaaca oo lala kaashaday gobolka Golaha Qiimaynta Goobta Tamarta Washington (EFSEC) si loo taageero isu-duwidda hore ee socotada rayidka iyo militariga ee go'aannada fadhiyada ee is waafajinaya. Natiijooyinka mashruuca waxaa ku jiri doona macluumaad ku saabsan isbeddellada tamarta, siyaasadaha, ku-dhaqanka wadatashiga, talooyinka hannaanka loo habeeyay iyo kheyraadka khariidaynta ama arjiga khariidaynta si loo caawiyo fadhiga xarunta tamarta.
Mashaariicda Tamarta waxay ubaahanyihiin ogeysiis qoraal ah waaxda difaaca
Sharciga gobolka Washington wuxuu ubaahan yahay ogeysiis qoraal ah Waaxda Difaaca (DOD) codsiyada ogolaanshaha tamarta (RCW 36.01.320). Soo-saareyaasha tamarta iyo dib-u-eegeyaasha waxaa lagula talinayaa in ay la-tashi hore iyo mid socdaba la yeeshaan DOD inta lagu jiro geedi-socodka horumarka si loo aqoonsado loona qorsheeyo wixii ku saabsan walaacyada la xiriira howlaha millatariga iyo amniga. Xiriirrada hore ee la tashiga DOD waa:
Dhismaha Tababarka Northwest Range (NWTRC)
Dekedda Oak, WA 98278-5000
Telefon (360) 930-4085
Ciidamada Cirka Mareykanka Xafiiska Deegaanka Deegaanka Galbeedka (AFCEE / RO-W)
50 Fremont Street, Qolka 2450
Telefon (415) 977-8884
DOD Siting Nadiifinta Si aad uga mid noqoto nidaamka dib-u-eegista ee hoosta Xafiiska Xoghayaha Difaaca, booqo www.acq.osd.mil/dodsc/
Si aad u hesho ogeysiisyada barnaamijka, iska qor Liiska iimaylka ee ku habboonaanta rayidka iyo militariga. Su'aalaha warbaahinta, la xiriir Penny Thomas, Isgaarsiinta Ganacsiga 206-256-6106.
2015-2016: Ganacsigu wuxuu ku dhaqaaqay daraasad xadgudub ah oo loogu talagalay Sharci dejinta (Oggolaanshaha sharciga: 2015 3-dii ex.s. c 4 s 128). Jaamacadda Bariga Washington waxay diyaarisay warbixin bilow ah oo ku saabsan dhaqamada ugu wanaagsan ee dalka oo dhan, kaas oo Ganacsiga dib loo eegay iyadoo lagu saleynayo fikradaha faallooyinka dadweynaha bishii Febraayo 2016. Ganacsigu wuxuu helay $ 98,000 miisaaniyadda gobolka si loo dhammaystiro daraasadda, iyadoo loo adeegsanayo lacag u dhiganta $ 485,000 deeqda DOD iyada oo loo marayo Xafiiska Isku hagaajinta dhaqaalaha (OEA). Ganacsigu wuxuu kiraystay lataliye si uu u diyaariyo finalka Daraasadda Isticmaalka Dhulka ee Madaniga iyo Milatariga, oo loo gudbiyay Sharci dejinta bishii Diseembar 2016.
2017: TSG waxay diyaarisay talooyin ku saabsan Ganacsiga si loo horumariyo macluumaadka iyo gaarsiinta baahiyaha qorsheynta rayidka iyo militariga. TSG waxay ku darsatay faallooyinka dadweynaha Istaraatiijiyadda Iswaafajinta Milatariga iyo Bulshada Gobolka Washington, qorshaha hirgelinta barnaamijka.
2018: Ganacsigu wuxuu hirgaliyay qeyb ka mid ah wacyigalinta iyo kaalmada farsamo ee sanadka 2017 Istaraatiijiyadda Iswaafajinta Milatariga iyo Bulshada Gobolka Washington, iyada oo taageero laga helayo abaalmarinta OEA ee abaalmarinta $ 497,000. Ganacsigu wuxuu deeqda u adeegsaday inuu soo saaro buug tilmaame iswaafajin ah.
2019: Ganacsiga ayaa daabacay Buugga Tilmaamaha Is-waafajinta Milatariga iyo Bulshada ee Gobolka Washington iyada oo ah kaalmo farsamo oo ku saabsan qorshaynta rayidka iyo militariga. Ganacsigu wuxuu kaloo bilaabay inuu taageero dadaallada isku-dubbaridka iskaashiga iswaafajinta maxalliga ah ee ilaalinta dhow Joint Base Lewis-McChord (JBLM). Sharci dejintu waxay meel mariyeen Hindise Sharciyeedka Guurtida (SSB) 5748 jihaynta Ganacsiga si loo sameeyo barnaamij deeq ah oo lagu taageerayo mashaariicda bulshada ee diiradda saaraya iswaafajinta.
2020: Ganacsigu wuxuu daabacay Warbixin Sharci-dejin ah oo ku saabsan aasaasidda Xisaab Bulsho Difaaca (DCCA) si looga jawaabo SSB-5748, dejinta tilmaamaha barnaamijka deeqaha iyo kala-mudnaanta mashaariicda ku-habboon is-waafaqsanaanta maxalliga ah. Ganacsigu wuxuu kaloo OEA ka helay deeq lacageed oo dhan hal milyan oo doolar oo ka timid OEA oo loogu talagay Qiimaynta Tamarta La jaan qaadi karta (CESA). CESA waa iskaashi ay la leedahay Golaha Qiimaynta Goobta Tamarta ee Gobolka Washington (EFSEC) si kor loogu qaado isku-duwidda hore ee madaniga iyo militariga ee fadhiga tamarta iyo horumarka.